फ्रान्स - ठीकै एक पंक्ति मा शताब्दीयौंदेखि फैशन को दुनिया को एक trendsetter मानिन्छ जो एक देश। मान्छे कसको लागि फैशनेबल र स्वादिष्ट साथ फैशन रुझान - छैन खाली वाक्यांश, सबै को पहिलो फेसन मा फ्रान्स ले, सुशील पेरिस सबै नियम निम्न हेर्न। त्यहाँ फ्रान्सेली फैशन यसको आफ्नै peculiarities छ कि छैन भनेर? त्यहाँ फैशन-उद्योग को दुनिया मा फ्रान्सेली फैशन को नियम को एक readout हुँदा देखि? यी प्रश्नहरूको रोक्न र तिनीहरूलाई जवाफ तैनाथ गर्नुपर्छ।
फ्रान्सेली फैशन को इतिहास
देश सत्तारूढ अधिकारीहरु नियन्त्रणमा हुँदा थप लुइस XIV को शासन देखि फ्रान्स सम्बन्धित "फैशन", को अवधारणा औद्योगिक उद्योग विकास तीव्र गतिमा थाले। यस सन्दर्भमा फ्रान्सेली अदालतले, युरोपेली को legislator छलफल भएको थियो फैशन। फैशन बारोक रेशम र बेल को उत्पादन गर्न सम्भव धन्यवाद गरिएको थियो। उज्ज्वल सजावट संग Complemented र artfully draped शानदार बेल र रेशम कपडे शान र धन को एक विशेषता थिए।
हाल थप पटक मा, फ्रान्सेली फैशन को बीसौँ शताब्दीमा साँच्चै क्रान्तिकारी टाइप मा विकसित भएको छ, महिला दराज मा पुरुषहरु वस्त्र वस्तुहरु: प्यान्ट, जैकेट, शर्ट र पनि stricter सम्बन्ध। यस्तो बोल्ड तख्तापलट romanticism देखि फ्रान्सेली मान्छे फैशन कोको Shanel देखि पनि टाढा, सबै-महिला फैशन बनाउन नयाँ बाटो, सबै थाह साथ, modernism गरिएका।
धेरै ठूलो रचनात्मक खोज Chanel - लगभग हरेक आधुनिक महिला एक दराज ट्राउजर, ज्याकेट र साना कालो पोशाक छ। छैन कम फैशन सहायक ज्ञात उनको नाम - धातु आभूषण र एक श्रृंखला मा प्रसिद्ध quilted हाते झोला को। एउटै पनि प्रतिष्ठित Chanel अत्तर घर को भने गर्न सकिन्छ।
कोको Shanel लामो गएको छ, तर कुरा यो जीवित र उनको नाम को फैशन घरको फ्रान्सेली फैशन सप्ताह को फैशन उद्योग मा मुख्य संलग्न प्रमुख घरहरू हुन जारी छ। कोको नै यो ठूलो महिला सजिलै र irreversibly को XX सताब्दी को फैशन असर गर्न सक्छ किनभने, यो अनुकरण र यसलाई जो एकदम जायज छ, प्रेरित उद्धृत गर्न अझै पनि खोजिरहेको छ, महिला फेसनमा पूर्णतया नयाँ तस्बिरहरू शुरू, Chanel फैशन घर स्थापित। पुरुष दराज बाट सुरुवाल र अन्य सजिला कुराहरू वस्तुतः कुनै पनि स्त्रीलाई सार्वभौमिक र पहुँचयोग्य एक सानो कालो पोशाक बाहेक, साथै, यो Chanel छ, हामी आभूषण को एक स्वतन्त्र फेशन र प्रतिष्ठित विश्व रूपमा, सानो टोपी, ट्वीड, पोशाक आभूषण को फैशन मा उपस्थिति र स्थिर उपस्थिति योगदान र पनि खडा एक तन लागि फैशन।
अर्को ठूलो-नाम डिजाइनर फ्रान्स - मसीही डायर। एक नयाँ धनुष को शैली मा स्त्री कपडे गर्ने आविष्कार र नयाँ स्तरमा "फ्रान्सेली फैशन" को अवधारणा गुलाब सबैभन्दा प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर को।
महिला र आफ्नो पोस्ट-युद्ध मुड, सपना र सबै समातिए डायर गन्ध प्रतिभाशाली मास्टर चाहनुहुन्छ। कि सख्त छोटो स्कर्ट, ट्राउजर र लगभग पुरुषहरु जैकेट को पहिले नै थकित समयमा parisian, त्यसैले sverhzhenstvennaya डायर संग्रह उत्साह र आनन्द संग भेट भएको थियो। उज्ज्वल रंग, धनी कपडे, को गोलीगाँठो (सुडौल वा सीधा) गर्न स्कर्ट, सानो गोलाकार काँध, कमर कडा - सबै परम्परागत स्त्रीत्व को आकर्षण बारे चिल्ला को यो नयाँ संग्रह मा। यसलाई चाँडै संसारको बनेको नयाँ फ्रान्सेली फैशन, थियो।
Yves सेन्ट Laurent
उहाँले सधैंभरि फैशन को इतिहास मा कुँदिएको मसीही डायर गरेको उत्तराधिकारी छनौट जो XX सताब्दी को अग्रणी डिजाइनर, एक को नाम।
सुशील क्लासिक - धेरै फैशन विचार Laurent अहिले छ। यसरी, महिला tuxedos, पछि ब्रांडेड भइन् व्यापार कार्ड ब्रान्ड fashionistas को कल्पना मारे। यो Yves सेन्ट Laurent सक्रिय पहनने प्रस्ताव महिलाहरु पतलून सूट लागि turtleneck संग स्वेटर, कालो छाला जैकेट, मा कपडे सफारी-शैली जूता, ethnics - यी सबै कुराहरू बिना कठिन दुनिया मा कुनै पनि शहर को एक महिलाको दराज कल्पना छ।
निस्सन्देह, यो सबै फ्रान्सेली फैशन घर छ, फेसन संसारमा बिना obnoxious र अपमानजनक Gaultier, Lacroix कल्पना, फैशनेबल पियरे CARDIN, लुई Vuitton, सुरुचिपूर्ण, Hubert डे Givenchy र धेरै अन्य ठूलो डिजाइनर द्वारा हैंडबैग र सामान को मास्टर अपूरो हुनेछ।
आजको युवा डिजाइनर
आज, "जवान डिजाइनर" वा "फेशन डिजाइनर नवोदित" को शीर्षक फेशन-उद्योग तयार-को पहनने को परम्परागत अवधारणा आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् जो जवान कलाकारहरूको नाम भर देखि, कुनै विशेष महत्त्व छ। व्यक्तिहरूलाई यो प्रबन्धन। उदाहरणका लागि, बौद्धिक परम्परा र फैशन घर Balmain आफ्नै नयाँ युवा स्वाद बीच सन्तुलित, फैशन को दुनिया मा पहिचान पाउन भाग्यमानी थियो Olivier Rustan। प्रत्येक ब्रान्ड Balmain फैशन शो दर्शक को चर्को ताली अन्तर्गत आयोजित छ, र पश्चिमी तारा आफूलाई Rustanov मित्रता र सहयोग प्रदान।
अर्को सफल जवान फ्रान्सेली डिजाइनर - Nikolya Gesker - 2012 सम्म फैशन घर Balenciaga को कला निर्देशक रूपमा काम गरे। संग्रह Ghesquière को ज्यामिति प्रकारका उदार स्वाद dischaynom पैक संग संयोजन मा सुरुचिपूर्ण silhouettes teemed। लुई Vuitton - 2013 देखि, Nikolya Gesker अर्को प्रसिद्ध ब्रान्ड को रचनात्मक निर्देशक भयो।
जवान डिजाइनर Giyom Anri तिनीहरूलाई लागि बालिका नयाँ मनपर्ने ब्रान्ड दिने, झन्डै भूल फैशन घर Carven सम्झना गर्न फैशन को दुनिया बाध्य छ। नीना Ricci - अफवाहहरु अनुसार, डिजाइनर इतिहास संग अर्को ठूलो फैशन घर टाउको एउटा रोचक प्रस्ताव गरे।
यो फ्रान्स थियो XVIII सताब्दी टाढा को दोस्रो आधा फेशन र यो संग जोडिएको छ सबै मा विशेषज्ञता पहिलो पत्रिका देखा पर्न थाले पछि। त्यो समय मा फ्रान्सेली फैशन पत्रिका Watercolors संग हात द्वारा चित्रित र फैशन प्रत्येक भाग को विवरण सँगसँगै थिए जो केही ठूलो प्रिंट थिए।
आधुनिक सुशील चमक पहिलो पेरिस पत्रिका l'Officiel, सबैभन्दा पुरानो फ्रान्सेली फैशन पत्रिका, जसको रिलिज अझै मा रहेको छ मा 1921 मा प्रकाशित जस्तै, फ्रान्सेली फैशन को संस्करणहरू को देखापर्यो। 1938 मा यो पृष्ठ मा पहिलो रंग फोटो थियो पत्रिका थियो।
1937 मा फ्रान्स, त्यहाँ Marie-क्लेयर साप्ताहिक पनि आफ्ना समकालीनहरूको तल आउन थियो। यो प्रकाशन छैन मात्र वैश्विक र फ्रान्सेली फैशन, तर पनि सांसारिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य र सौन्दर्य व्यञ्जनहरु, पाठकहरूका पत्र प्रकाशित र महिला जीवन को अन्य महत्वपूर्ण पक्ष कवर, आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ के बारेमा समयमा नवीन थियो । तसर्थ, संस्करण लोकप्रिय पत्रिका को महिला को ठूलो सेना को पहिलो थियो।
1945 मा, पाठकहरूलाई फ्रान्सेली पत्रिका फैशन सम्बन्धित लेख र फोटो थिए मुख्य सामग्री जो Elle, प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो मुद्दा रेकर्ड समय मा बेच र दशक को एक जोडी पछि Elle संसारको सबै भन्दा व्यापक पढ्न पत्रिका रूपमा बुझे।
फ्रान्सेली शैली, पहिले नै कुख्यात भएको छ जो - फ्रान्सेली dandies देखि शैली र कपडे र सामान को विकल्प प्रतिबिम्बित स्वाद छ। सबै समय मा यो विशेष शोधन र आकर्षण भिन्नता थियो।
को रनवे गर्न निकटता उच्च फैशन को, को पाठ्यक्रम, आफ्नो देखिने प्रभाव मात्र कारक फ्रान्सेली सडक फैशन को विशेष आकर्षण असर भनेर छोड्दा, तर छैन। एक सुरिलो र unbanal छवि निर्माण, incongruous, जस्तो देखिने कुराहरू संयोजन र फ्रान्सेली फेशन र शैली भनिन्छ के को आधार खेल्छ गर्न Masterly कौशल। न्यानो कोट मा पातलो जर्सी वा राख्दै , शिफन पोशाक लगभग पुरुष संग, ट्रंक उनको ठूलो-हजुरआमा बाहिर लिएको हुनत रूपमा ट्वीड ज्याकेट, र स्वाद मूल सामान को मसलाहरु छवि, फ्रान्सेली दुनिया फ्रान्सेली कर्पोरेट देखिनुहुन्छ, पूर्ण अद्वितीय छाप बनाउने छन्।
फ्रान्सेली - हड्डी गर्न यूरोप, तिनीहरूलाई को भन्दा युरोपेली मान र लैंगिक समानता गर्न प्रतिबद्धता प्रचार गर्छन्। तिनीहरूले स्वतन्त्र आफ्नो करियर हो, र यो तर उपस्थिति असर गर्न सक्दैन। सामान्यतया फ्रान्सेली किफायती ब्रान्डहरु र लुगा को शांत रंग प्राकृतिक प्रकाश बनाउन-अप विस्तार गर्ने रुचि (र अक्सर बिना)। साँचो फ्रान्सेली leitmotiv वर्तमान थोरै लापरवाही को कूटवेश, तर लापरवाहीसंग छैन मा। यो लापरवाही यसको अपील को शक्ति बुझेर धेरै राम्रो-groomed मात्र किन्न सक्छन्, महिला अकाट्य स्वाद छ। सामान र पोशाक आभूषण - फैशन को एक फ्रान्सेली महिला को कूटवेश सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। मिलान सेट दैनिक साँझ पोशाक बनाउँछ। फ्रान्सेली तिनीहरूले सामान फ्लिया बजार र प्राचीन पसलहरूमा मा उत्खनन गर्न प्रेम आभूषण गर्न आंशिक हो "इतिहास संग"।
फ्रान्सेली तरिका कसरी सिर्जना गर्ने
अरु देखि फ्रान्सेली शैली बीच मुख्य फरक - लुगा र विविधताको कुनै उज्ज्वल रंग। सुन्दर, मलाईदार रंग र क्लासिक कालो को हिउँ-सेतो वस्त्र को एक सिपालु संयोजन को पाठ्यक्रम प्रोभेन्स महिला। त्यसैले, सामान्य कालो पोशाक Maxi राम्ररी चुनिएको गहने र प्यारा विवरण Frenchwoman साँझ लागि एक रमणीय outfit परिणत हुनेछ संग संयुक्त।
पोशाक - साँचो फ्रान्सेली को दराज मा एक विशेष लेख। प्रकाश कपडे र स्कर्ट सजिलै, स्त्री चंचल र अझै परिष्कृत छवि शामिल। सीधा कट स्कर्ट र फ्रान्सेली फैशन प्रदान सबै को quintessence रूपमा स्कर्ट तुलिप रूपमा फ्रान्सेली महिला को प्राथमिकताहरू।
वस्त्र - यो छवि सामान बिना नहीं सिर्जना गर्न, सबै छैन। Chanel महिलाहरु को समय देखि अझै पनि चिटिक्क आकार र सूथिंग रंग को टोपी लगाउने। यो सिजन विशेष लोकप्रिय टोपी हुनेछ "फेडोरा" र "Trilby"।
फ्रान्सेली बैग फराकिलो तर सुरुचिपूर्ण शैलीहरू रुचाउँछु। ब्यागी बैग knapsacks जस्तै तिनीहरूले रुचि हुन असम्भाव्य छन्। दैनिक पहनने लागि क्लासिक दुकानदारों प्रकाशन लागि क्लच को रोचक किसिमको - पेरिसियन को विकल्प छ।
लामो स्टाइलिश हार हामी पनि फ्रान्स दिनुभयो। तिनीहरूले ठूलो स्तन संग महिलाहरु को लागि धेरै उपयुक्त छैनन् भनेर मनमा तर राख्नुहोस्। आभूषण मा फ्रान्सेली शैली - यो महान धातु र काठ प्रजातिहरू को मूल सजावट छ। तिनीहरूले भन्दा तस्बिरहरू लागि उपयुक्त छन्।
फ्रान्सेली - कला शिल्पविद्याविद रोचक तस्बिरहरू सिर्जना गर्नुहोस्। परिणामस्वरूप अन्ततः टुकडी धेरै पत्रहरु हुन्छन्। यो जटिल र सरल नै समय छ। एडअन सधैं मालिक को छवि मा immaculately काम हो, र सबै सँगै फ्रान्सेली आकर्षण को अनन्त पहेली छ। यो आकर्षण लोकतान्त्रिक संग संयुक्त र फ्रान्सेली शैली अरूलाई त आकर्षक गर्छ।
के बाट डेनिम शर्ट लगाउन? धेरै सिफारिसहरू
परिवार संघर्ष, आफ्नो समाधान को रचनात्मक तरिका
एक मोटरसाइकल लागि पछाडिको ट्रंक। हुए यात्रा!
बालक गोदभराई को पात्रो: कसरी कुन दिन एक केटा गर्भ धारण गर्न गणना गर्न?
को लेखापाल सहयोग गर्न: दाखिल इलेक्ट्रनिक रिपोर्ट
यूरी Gagarin पहिलो स्थान मा उड्यो गर्ने थियो
एक वायरलेस माइक्रोफोन राम्रो के हो?
Polypropylene सेल: मुख्य विशेषताहरु, स्कोप
गर्भावस्था मा Reglan: को फाइदा र बेफाइदा।